Maxaad kala socotaa Mooshinka xil ka qaadista madaxweyne Trump ee ay ku dhaqaaqeen xildhibaannada Dimuqraaddiga? - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Trump iyo dhismaha Capitol Hill
Xubnaha ka tirsan guddiga caddaaladda ee aqalkan ay aqlabiyadda ku leeyihiin xisbiga Dimuqraaddiga isku raacay inay si gaar ah u billaabaan dhageysiga mooshinka xasaasiga ahaa ee muddada dheer loo ol'oleynayay.
Image caption Guddoomiyaha Dimuqraaddiyiinta Jerry Nadler (bidix) iyo Doug Collins
Arrimaha ay ansixiyeen waxaa ka mid ah inay qareennada u oggolaadeen inay si shaac baxsan su'aalo u weydiiyaan dadka markhaatiyaasha ah.
Guddoomiyaha guddiga ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga Jerry Nadler ayaa markii uu dhageysiga furayay sheegay in howshan dadka qaarkiis ay u arkaan su'aalo weydiin ku saabsan mooshinka halka kuwo kalena ay u arkaan baaritaan lagu sameynayo madaxweynaha.
"Ma jiro farqi dhinaca sharciga ah oo u dhaxeeya labadaas oraah, anigana mar dambe ima dhibi doono magacii aan u yeeli lahaa howshan".
Image caption Ol'olaha ku saabsan xil ka qaadista madaxweyne Trump ayaa horay usoo billowday
Sida uu qoray wargeyska Washington Post, dacwad kasta oo maxkamadeed lagu soo oogo madaxweyne Trump waxaa ka mid noqon kara jabinta sharciga caddaaladda, ku tagrifal awoodeed iyo inuu ku gacan seyray in loogu yeero su'aalo weydiin".
Doug Collins, oo ah Xildhibaanka aqalka wakiillada ee laga soo doortay gobolka Georgia, isla markaana matala xisbiga Jamhuuriga ee uu Trump kasoo jeedo ayaa yiri: "Saaxiibadeyda aan wada shaqeyno si fiican ayey u ogyihiin inaysan heysanin codadka ay ku ansixin karaan in mooshinka laga hirgaliyo aqalka, laakiin sidaasoo ay tahay way iska rabaan inay xilka ka qaadaan madaxweynaha.
"Marka waxay iska dhigayaan dad diyaarinaya mooshinka xil ka qaadista".